बाेयर जातकाे बाख्रा पाल्ने साेचमा हुनुहुन्छ ? सरकारले सहुलियतमा पाठापाठी दिँदैछ । | कृषि डेली
बाेयर जातकाे बाख्रा पाल्ने साेचमा हुनुहुन्छ ? सरकारले सहुलियतमा पाठापाठी दिँदैछ ।
-कृषि डेली	 -१७ माघ २०७५, बिहीबार ०६:३२
काठमाडाैं – सरकारले कृषि क्षेत्रमा जति लगानी गरेको छ, त्यसको प्रतिफल कति होला ? अधिकांसले भन्ने गरेका छन्, ‘कृषिमा लगानी बालुवामा पानी ।’ बास्तबमै अवस्था त्यस्तै पनि छ । तर, त्यसको मतलब केही काम हुदै नभको भन्न अलिक नमिल्ला । केही कामहरु यस्ता, जो उद्हारणीय छन् । जसको चर्चा सर्वत्र छ । पछिल्लो समय नेपालमा कृषि व्यवसाय गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । त्यसमा पनि माछा, गाई, बाख्रा, कुखुरा पालन गर्ने किसानहरु बढी छन् ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गत बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र बन्दीपुर, तनहुँले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा २०७१ मा यूरोपबाट केही थान बोयर जातका बोका तथा पाठीहरु ल्याएर पालिरहेका छन् । वल्र्ड वैंकको सहयोग तथा कृषि खाद्य सुरक्षा आयोजना अन्तर्गत यस केन्द्रमा ५० वटा वोयर बाख्रा र ७ वटा वोका भित्र्याईएको थियो । यही विउँबाट अहिले बार्षिक रुपमा जन्मिने बाख्रा तथा बोकाहरु सहुलियत दरमा किसानहरुलाई वितरण गरिदै आएको जनाईएको छ ।
सोही वर्ष आईएफएडीको सहयोगमा किसानकालागि उन्नत विउ विजन कार्यक्रम अन्तर्गत फेरि अष्ट्रेलियबाट मासुकालागि १७ वटा बोका र ४ वटा पाठी ल्याइएको थियो । ५० वटा ल्याइएको मध्ये बाँकी बोकापाठी गुल्मी र अर्घाखाचीस्थित सरकारी फार्ममा राखिएको छ ।यसवर्ष बोयर र क्रसगरी झण्डै सय वटा बाख्रा वितरण गरिएको बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र बन्दीपुरका प्रमुख तारा कडलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै अघिल्लो वर्ष २५ वटा शुद्ध बोयर तथा ५०, ६० वटा क्रस बाख्रा वितरण गरिएको जनाईएको छ । कडेलका अनुसार यही अनुपानमा बोयर तथा क्रम बाख्राहरु किसानलाई वितरण गरिदै आएको छ । तर, माग यति धेरै छ, कि पुर्याउँन संम्भव नै छैन । वार्षिक हजार बाह्र सय बाख्रा तथा बोकाको माग हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारी स्तरबाहेक निजी लगानीकर्ताले पनि नेपालको सिन्धुली, चितवन, हेडौडा, नुवाकोट लगायतका स्थानमा यूरोपबाट खरिदगरी ल्याउँने गरेका छन् । उनीहरुले ल्याउँने त्यस्ता बोका पाठी भने महंगो हुने गरेको छ । सरकारले बोयर जातको बोकाको १२ सय केजी तथा बाख्रा एक हजार केजीका दरले विक्री गर्दै आएको छ ।
विउका लागि सहुलियत दरमा विक्री गर्ने सरकारले वितरण गरेको बाख्राबोकाको अधिकतम मूल्य २५, ३० हजार हुन आउँछ । तर, त्यही अनुपान वजन भएका बोकाबाख्रा निजी व्यपारीहरुले साढे ३ लाखसम्म विक्री गरिरहेको केन्द्रका प्रमुख कडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुगमन गर्ने निकाय नुहदा यसको रोकथाम गर्न सकिएको छैन । तर, यस जातको बोकापाठीको माग जताततै हुने गरेको पाईन्छ । यो १३० केजीसम्मको हुन्छ ।
यस केन्द्रले बोका तथा बाख्रा पालनगरी किसानलाई सहुलियत दरमा विक्रीवितरण गर्नुका साथै त्यस जातका बोका तथा बाख्राबारे विभिन्न अनुसन्धानहरु पनि गर्दै आईरहेको छ । कडेलका अनुसार दाना खुआउँन सकिने तथा माउँबढी भएका किसानहरुलाई यस्ता बोयर जातका बोकाहरु विक्री गर्दै आएका छन् । त्यस्तै सामन् जातका बाख्रा २० वटा माउँ र ४ वटा बोका पनि यूरोपबाट ल्याईएको छ ।
२०७१ मा ल्याएका यी बाख्रा दूधका लागि पालिएका हुन । यसको दूधबाट चिज उत्पादन समेत हुदै आएको कडेलले जानकारी दिए । एक पटकमा चार लिटरसम्म दूध दिने जनाइएको छ । आमाको दूधसंग मिल्दो जुल्दो प्रकृतिको हुने भएकाले विभिन्न रोग लागेकाहरुले पनि पिउन तथा चिज खान मिल्ने जनाईएको छ । हाल यस केन्द्रबाट फार्मबाट ५०० रुपैया केजी चिज तथा ३० रुपैया केजी दूध विक्री गरिदै आएको छ । केन्द्रका प्रमुख कडेलका अनुसार विस्तारै लेभलिङ गरेर यही आर्थिक वर्षमा बजारमा विक्री गरिने सोच छ ।
दूधबाट बन्ने फेरियल सावुन, मोस्टराईज क्रिमहरु पनि बनाउँने कामहरु भईरहेको उनले जानकारी दिए । यस केन्द्रले बाख्रा पालनकासाथै किसानलाई कस्तो खालको खोर आवश्यक पर्छ, भ्याक्सिन, दाना, जात विकास, व्यवसायिक बाख्रा पालन कसरी गर्ने, बर्षैभरी कसरी घास उत्पादन गर्ने जस्ता विषयमा अनुसन्धानहरु पनि हुने गरेको छ ।
कृषि डेली 1075 posts 1 comments
माघ १७ गतेकाे तरकारी तथा फलफूलकाे खुद्रा मूल्य
छाडा पशुपंक्षीको व्यवस्थापनका लागि कुश्मामा गौशाला निर्माण
खसीबोका पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने प्रदेश ५ काे निर्णय
रौतहटको विजयपुर नगरपालिकामा भ्यागुते रोगको प्रकोप